Fifandraisana : Nomem-boninahitra ireo miaramila aostraliana niady ho an’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaFifandraisana : Nomem-boninahitra ireo miaramila aostraliana niady ho an’i Madagasikara
28/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manan-tantara teo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena Antsiranana tamin’ny ady lehibe faharoa. Toerana izay nitrangan’ny fifandonana nantsoina hoe « Bataille de Madagascar », ka nidiran’ny anglisy tao raha mbola nanjaka tany ny governemanta Vichy. Ny tantara tsy fanadino. Nandritra ny fivahinianan’ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery Rajaonarimampianina any Antsiranana dia nametraka fehezam-bonikazo ho fahatsiarovana ireo tatsambo, miaramila ary mpanamory fiaramanidina aostraliana namoy ny ainy ho an’i Madagasikara tamin’ny ady lehibe faharoa izy.
Martiora niaro sy niady ho an’i Madagasikara tamin’ireo Frantsay ireto mivelona eto amin’ny « cimetière de guerre » eto Antsiranana ireo ary anisan’ny nomena voninahitra manokana ny tantsambo John Frederic Elis izay anisan’ny nitarika io tolona io.
Niara-dia tamin’ny filohan’ny repoblika ny masoivohon’i Aostralia eto amintsika, ny masoivohon’ny vondrona eoropena ary ireo teratany Aostraliana monina ao Antsiranana. Ny masoivoho Aostraliana izay nankasitraka ny vahoaka sy ny mpitondra malagasy noho ny nandraisana ireto miaramila lavo tamin’ny ady lehibe faharoa (1935-1942) ireto tahaka ny zanany mihitsy.
Noho ny fampanantenana MIAMI sy fiara mandeha anaty rano, sy fambolena “Coton de Tulear ”, ary ny fanitrihina “puce” any anatin’ny omby, dia nanantena mafy i Andry Rajoelina sy ireo ekipany fa ho lany amin’ny ...Tohiny